Dichroic TPU Firimu Vagadziri - China Dichroic TPU Firimu Vatengesi & Fekitori
0.4mm Dichroic Iridescent TPU Firimu yekugadzira shangu, mabhegi uye kushongedza
Isu tinopa Dichroic Iridescent TPU firimu 2020 Magical Machira ekugadzira shangu, mabhegi uye kushongedza. Isu takave nyanzvi mukushongedza firimu kweanopfuura makore gumi neshanu, tichifukidza mazhinji emusika weEuropean neAmerica. Isu tiri kutarisira kuzove wako wenguva refu mudiwa muChina.
0.2mm Iridescent TPU Firimu yekugadzira shangu, mabhegi uye kushongedza
Iridescent TPU Firimu Muraraungu Ruvara Magical Machira ekugadzira shangu, mabhegi uye kushongedza kunoitwa kwe TPU uye PET iridescent firimu. Iyo inharaunda ine hushamwari uye yakakwana zvigadzirwa zvekushongedza kwemasaga bhutsu uye ese marudzi ezvigadzirwa. Isu takave nyanzvi mukushongedza firimu kweanopfuura makore gumi neshanu, zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa mune mazhinji emusika weEuropean neAmerica. Tinotarisira nemwoyo wose kuva wako refu-shamwari naye China. Taura nesu izvozvi, isu tichaedza nepatinogona napo kusangana nekugutsikana kwako.